Izidingo eziyisisekelo zokuya e-United States - i-ESTA, umshwalense nokuningi | Ukuhamba kwe-Absolut
Izidingo eziyisisekelo zokuya e-United States: i-ESTA, i-Insurance nokunye okuningi
USusana godoy | | E-USA
Ufuna hamba uye e-United States? Ngabe ngizodinga i-visa, umshuwalense omuhle noma i-ESTA? Lapho sicabanga ngendawo okuyiwa kuyo okokuqala ngqa, sihlala sishaywa ukungabaza okukhulu ngokuthi yini okudingeka siyilethe. Ngakho-ke, ukuze uthathe uhambo oluthule bese uzivumela nje ukuthi usizakale ngokunye, siphendula imibuzo yakho.
Kuyiqiniso ukuthi kunezinombolo eziningi ze- izidingo eziyisisekelo nomunye umuntu ozoba omkhulu. Kepha asizukubeka izandla zethu emakhanda ethu, ngoba konke kulula ukukufeza. Vele, kufanele ngaso sonke isikhathi sikwenze kusengaphambili ukuze sikwazi ukuphuma ezinkingeni. Ngabe ufuna ukuthola ukuthi yiziphi lezo zidingo?
1 Yiziphi izidingo eziyisisekelo zokuya e-United States?
2 Ngabe ngidinga i-visa noma i-ESTA ukuhamba?
3 Iyini ngempela i-ESTA?
4 Ngingayicela kanjani i-ESTA futhi isebenza kanjani?
Yiziphi izidingo eziyisisekelo zokuya e-United States?
Kuyiqiniso ukuthi kuneziningana ezifana neVisa noma i-ESTA kuya ngokuthi sizobona ini ngokuhamba kwesikhathi. Kepha abadala, asikwazi ukukhohlwa amanye amaphuzu:
Njalo lapho sihamba, kufanele sikwenze kuphephe. Ngalelo gama nje lodwa, kusiholela ekucabangeni ngalokho kufakwa okuyisisekelo. Ukuya e-United States noma kwenye indawo, singanikezwa izimo ezithile zokugula noma ukuba nezinkinga ezithile ngemithwalo nezinto ezihlobene nayo. Ngakho-ke, nokuzimboza impilo, akukho okufana nokubheja okuhle umshuwalense wokuhamba. Njengoba kufanele wazi ukuthi ukunakekelwa kwezokwelashwa kubiza ngandlela thile uma kufanele sikukhokhele ephaketheni.
Kulokhu, kufanele uhlale uthinta amahhovisi lapho zicutshungulwa khona, nezinyanga ezimbalwa ngaphambi kohambo lwakho. Ngoba ungadinga eyodwa noma enye, kuya nge ama-visa noma izimvume. Kepha kuliqiniso ukuthi uma ungenayo i-visa, uzophatha ipasipoti efundeka ngomshini.
Ngabe ngidinga i-visa noma i-ESTA ukuhamba?
Umbuzo esizibuza wona kaningi. I- LE USA Ngenye yezindlela okufanele singene ngayo ezweni, ngaphandle kwesidingo sokuphatha i-visa nathi. Kepha ngokunengqondo, uchungechunge lwezidingo kufanele futhi kuhlangatshezwane nalo. Ngakolunye uhlangothi, uzodinga i-visa uma uzosebenza noma uzofunda e-United States, ngoba kusho ukuchitha isikhathi esithe xaxa lapho. Zonke izizathu zobungcweti noma uma uhamba ngezindlela zokuhamba ezizimele, zidinga nama-visa. Kepha kuyiqiniso ukuthi ngaphakathi kwama-visa, ungacela futhi i-'Ongowokufika '(ngokuhlala ezweni izinsuku ezingama-90) noma' i-Immigrant Green Card '(Ikuvumela ukuthi ungene futhi uphume noma nini lapho ufuna). Kukho konke okunye, uzodinga i-ESTA.
Iyini ngempela i-ESTA?
Kuyinto a Ukugunyazwa kokuvakasha, kepha ngaphandle kokuthola iVisa. Ngakho-ke ibizwa (i-VWP) noma i-Travel Exemption Program, okungukuthi, lapha bangena izakhamizi zamazwe akhululwe ku-visa kepha adinga ukugunyazwa okunjalo noma i-ESTA. Yimaphi amazwe akhululwe i-visa? Sekukonke kunamazwe angama-38 anjengeSpain, iFrance, i-Ireland, iPortugal, i-United Kingdom, njll. Uma uhlala kwelinye lawo, udinga kuphela ukucela ukugunyazwa.
Vele, uhambo lwakho kufanele lube lwe I-turismo yize abanye bengenela ibhizinisi. Futhi unethikithi eliqinisekisa uhambo oluthiwe kanye nosuku lokubuya. Ngaphezu kwalokho, ukuhlala e-United States akukwazi ukwedlula izinsuku ezingama-90, ngaphandle kwalokho, kuzofanele sivele sikhulume nge-visa esishilo ngaphambili.
Ngingayicela kanjani i-ESTA futhi isebenza kanjani?
Ngenye yezindlela ezisheshayo futhi ezilula esinazo lapho sicela idokhumenti. Ngoba lokhu kugunyazwa noma imvume, kuyacelwa nge-inthanethi. Khumbula ukuthi inhloso yayo njalo ukuthi uhambe ngenhloso yezokuvakasha, ezamabhizinisi noma ngoba kufanele ume endaweni yezwe. Ukuyicela kulula kakhulu, ngoba yincwadi elula nje okufanele uyigcwalise. Ngemuva kwalokho, wenza inkokhelo ezoba ngama-euro angama-29,95 umuntu ngamunye futhi kungakapheli amahora angama-72, unayo kwi-imeyili yakho. Kulula?
Elinye iqiniso elibalulekile ukuthi kusukela lapho uthola imvume, i- Ukusebenza kwe-ESTA kwe-United States yiminyaka emibili. Lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukungena nokushiya lelo zwe kaningi ngendlela ofuna ngayo, ngalezo zinyanga ezingama-24. Yize ukuhlala ngakunye kungangeqi ezinsukwini ezingama-90. Ngakho-ke, kusukela ngesikhathi owazi ngaso ukuthi uzohamba futhi ungomunye we- Amazwe angama-38 angenawo ama-visa, kufanele ucele ukugunyazwa kwakho. Ungayishiyi kuze kube umzuzu wokugcina! Yize kuliqiniso ukuthi unenketho yokukucela ngokuphuthumayo futhi kuthatha ihora elilodwa kuphela. Kepha kwesinye isikhathi kungahle kube nokubambezeleka.
Manje sesivele sicacile ukuthi, ukuhamba Akudingeki ngaso sonke isikhathi ukuthi kube inkinga yezincwadi. Sinezinketho kukho konke ukunambitheka nezindlela zohambo lwethu. Ngabe uzoya e-United States? Manje uyazi ukuthi nge-ESTA konke kuzoba lula futhi kusheshe. Uhambo oluhle!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izidingo eziyisisekelo zokuya e-United States: i-ESTA, i-Insurance nokunye okuningi
UKhisimusi waseCanada namasiko alo
Izinto okufanele uzenze ePontevedra